Maalinta: Diseembar 20, 2017
Gawaarida ayaa ku dhacda tareenka xamuulka ah ee Konya! 2 Injured
Degmada Aksehir ee Konya, isgoyska tooska ah wuxuu ka gudbay caqabadaha ka gudbaya xadka isaga oo isku dhacay, tareenka xamuulka ayaa ku dhacay gawaaridii taagneyd marinka. Dadka 2 ee gaariga ku dhaawacmay shilka. Sida ay sheegayaan wararka la helay shil xalay [More ...]
Iyada oo la raacayo nidaamka tigidhada elektiroonigga ah ee 'Belvan Card', mid ka mid ah mashaariicda gaadiidka ee muhiimka ah ee Dawladda Hoose ee Magaalada Caasimadda, 567 kun oo 806 rakaab ah ayaa la daabacay bil gudaheed. Intaa waxaa dheer, kaarka 22 kun ee 331 qof ee hal bil gudaheed la helay. [More ...]
Nidaamka Maareynta Gaadiidka Dadweynaha ee Deegaanka Denizli
Denizli degmada Metropolitan ee Turkey u saxiixay siyaasad, Management System Traffic maxalliga ah iyo kuwa wadaniga ah oo gebi ahaanba soo saaray Denizli ayaa fulin kaabayaasha farsamada. Dhamaan isgoysyada ku yaal bartamaha Denizli hal xarun [More ...]
Sannadihii hore ee Jamhuuriyadda, siyaasad qaran oo tareen iyo tareen oo madaxbannaan ayaa la dabagalay iyada oo ku saleysan horumarka iyo difaaca. Sannadihii hore ee Jamhuuriyadda, siyaasad qaran oo tareen iyo tareen oo madaxbannaan ayaa la dabagalay iyada oo ku saleysan horumarka iyo difaaca. Suurtagalnimada weyn [More ...]
Meelo cusub oo tareen ayaa lagu darayaa safka Ankara ee safarka dadweynaha. Ugu dambeyntiina, Gawaarida tareenka ee 6 ayaa la dhammeystirey. Dr. Waxaa ku jira rakaabkii gaadiidka ee amarrada Mustafa Tuna [More ...]
Dowladda, oo ballan qaaday inay soo saari doonto qorsheyaal qandaraas hoosaadyo dhamaadka bishaan, waxay qorsheyneysaa inay u soo bandhigto sidii qorshe B oo leh Go'aan cusub, haddii ay ku guuldareysato inay sare u qaaddo sharciga. Barlamaanka laga bilaabo usbuuca soo socda [More ...]
Dalka Mareykanka, tareenka burburay wuxuu ku socdaa xawaare xoogan oo ah 3 caadi ah
Waddanka Mareykanka, socdaalka Seattle-Portland ee tareenka rakaabka ah oo xumaada inta uu gudbaya buundada, 3 jeer oo xawaare caadi ah ayaa la muujiyay inuu socdo. Seattle-Portland ee Mareykanka iyo burburka tareenka saaran buundada, saac [More ...]
109 Sanadka Haydarpaşa Xarunta Tallaalka Dhallinyarada
Xarunta tareenka ee Haydarpaşa, oo ah mid ka mid ah dhismayaasha waaweyn ee magaalada Istanbul, ayaa waxaa ku socda dayactirkii ugu weynaa muddo 109 sano ah oo ay jirtay. 50 tan oo bir ah ayaa loo adeegsaday saqafka dhismaha, kaas oo badbaaday inkasta oo la gubay saddex jeer. Milliyet wuxuu daawaday shaqooyinka dhismaha taariikhiga ah. gaadiidka, [More ...]
Haddii aan Iskuulka Kartimku ahayn khidmadda masaafada fog, IZBAN looma ogola!
Izmir, 1 bisha Janaayo ee gaadiidka magaalada ayaa laga hadli doonaa. Laakiin arrinta si aad ah looga wada hadlay marka loo eego kor u qaadista ayaa ah bixinta horudhaca ah ee khadka 'Alia Sa-Selçuk İZBAN' kaasoo ku xira magaalada dhinaca waqooyi-koonfur. Meel kasta oo aad joogtid [More ...]
Kaararka Ardayda Habka Visa-ga ee Kocaeli Sii Socota
Qeybaha Kaararka Safarka ee Gaadiidka Dadweynaha ee Kocaeli Magaalada Kocaeli Gawaarida Kaararka Safarka ee ay soo qabanqaabiyeen hoos udhaca nidaamka kaararka ardayda ayaa socda. Kaararka safarka ardayda ee la dhimay ee adeegga Y webKSİS iyo MEBSİS [More ...]
"Metro driverless horeysay Turkiga" iyo Madaxweynaha IMM December Madaxweynaha 15 Recep Tayyip Erdogan furay Mevlut dhaqday Üsküdar-Sancaktepe Metro Line in wajiga koowaad ee maalintii Üsküdar-Yamanevler 4 292 344 kun [More ...]
RayHaber 20.12.2017 Warbixinta Shirka
Alaabada la siinayo kuwa isku xiraya quwada korantada ee Ankara Subway tareenka tareenka Bulk SAE 40 Engine Diesel Engine saliida waxaa laga iibsaday Tamarta gudbinta Tamarta si loo Sameeyo Dayactirka Buundada Shaqada si loo sameeyo [More ...]
Abaal marinta “Deegaanka Deegaanka Saaxiibtinimada leh” ee ay bixiso Qaramada Midoobay magaalooyinka magaalooyinka xeebta ku teedsan marki ugu horeysay sanadkaan waxaa lasiiyay İzmir. Duqa Magaalada Istanbul Apol Kocaoglu ayaa xafladda abaalmarinta ku guddoonsiiyay Tirana, Albania. [More ...]
Liiska Musharaxiinta U Qalma Inuu Ka Qayb Galo Koorsada Tababaraha
Tababbarka tababarayaasha tababarka ayaa loo qaban doonaa iyadoo lala kaashanayo İŞKUR iyo Gaadiidka TCDD. 27 wuxuu bilaaban doonaa Disembar 2017 kahor koorsada baaritaanka cilmi nafsiga [More ...]